Andiana Bibin-tsaonjo Mpiantafika Rehefa Fahavaratra, Mandravarava ny Voly Any Amin’ny Firenena Afrikàna Marobe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2017 2:50 GMT
Ilay bibin-tsnjo mpiantafika, mpandravarava ny toerana fambolena any amin'ireo firenena afrikàna maro. Sary: wikipedia.org CC-BY-20
Raha eo ampiarenana avy amin'ny krizy ara-toekarena erantany tato anatin'ny taompolo farany ny toekaren'ireo firenena afrikàna, misy loza iray mitatao mety hampihisatra io fisondrotana io manangasanga ho an'ny sehatry ny fambolena any amin'ny maro amin'ireny firenena ireny. Izay indrindra, mandrakotra firenena marobe ao amin'ilay tanibe ny “bibin-tsaonjo mpiantafika rehefa fahavaratra” (Spodoptera frugiperda) (na FAW, avy amin'ny teny anglisy Fall ArmyWorm) avy any Amerika.
Ny FAW dia tao Afrika afovoany sy andrefana aloha no tsikaritra tany ampiandohan'ny taona 2016 (Sao Tomé-et-Principe, Nizeria, Bénin sy Togo) avy eo nandritra ireo volana voalohan'ny 2017 tany Angolà, Botswana, Borondy, Côte d'Ivoire, Repoblika demaokratikan'i Congo, Etiopia, Ganà , Kenya, Malawi, Mozambika, Namibia, Nizera, Roandà, Sierra Leone, Afrika Atsimo, Tanzania, Ogandà, Zambia sy Zimbaboe. Mitohy ny fiparitahany.
Manome ny mombammba ity bibin-tsaonjo ity ny tranonkala afrique7.com:
Antsoina hoe “bibin-tsaonjo mpiantafika rehefa fahavaratra” ary avy any Amerika, vao haingana ity olitra ity no nisy nampiditra tao Afrika, ary efa mandravarava sahady any amin'ireo tany fambolena serealy, fa indrindra indrindra ny katsaka ao Zambia, Zimbaboe, Afrika Atsimo ary Ganà. Toa tratra ihany koa i Malawi, Mozambika ary Namibia, raha ny voalazan'ny ONU.
Rotehin'ity bibin-tsaonjo ity ny katsaka, varimbazaha, ny “millet” sy ny vary, izay sakafo fototra ho an'ny faritra atsimon'i Afrika, faritra iray izay efa ianjadian'ny haintany mahatsiravina rahateo nandritra ny taona maromaro farany teo.
Araka ny voalazan'ny Foibe iraisampirenena ho an'ny fambolena sy ny biosiansa (CABI), “haingana be ny fiparitahan'ireto bibin-tsonjo ireto ao amin'ny tanibe afrikàna”, ary « sambany izao ity karazany ity no niteraka fandravàna tany fambolena tahàka izao » tao amin'ny tanibe.
Any amin'ireo firenena tratry ny fanafihan'ilay bibin-tsaonjo, efa mampitsangam-bolo sahady ny fahavoazana. Araka izany, ao Zimbaboe, toerana nanaovan'ny FAO fivoriana maika niaraka tamin'ireo manampahaizana avy aminà firenena 13 mba handraisana tetikady hiadiana amin'ity loza ity, taterin'i Sally Nyakanyanga, mpanao gazety ao an-toerana, fa:
Fahavalo sarotra resena ny Spodoptera frugiperda. Tsy mandaitra aminy ireo fanafody famonoana bibikely raha tsy dieny mbola kely ilay olitra ary tsy mbola niteraka fahavoazana hita maso teny amin'ireo zavatra novolena. Aorian'izay, tsy misy intsony fanàfana mahagaga azo atao. Mety hiteraka fatiantoka hatramin'ny 70 isanjato amin'ny vokatra miakatra ity bibikely ity.
Tohizan'i Sally Nyakanyanga amin'ny fanolorana ny tranga nanjo ny tantsaha iray nanandrana ny hiady tamin'io bibin-tsaonjo mpiantafika io tamin'ny fampiasàna ireo vokatra simika fampiasa amin'ny fambolena efa nahazatra azy hatrizay tamin'ireo bibin-tsaonjo zanatany. Saingy hafa mihitsy ity karazany ity izay tsy andairan‘ireny fanafody simika ireny :
Vavariro Mashamba, 51 taona, dia manana toeram-pambolena sy fiompiana ao amin'ny distrikan'i Karoi, afovoany avaratr'i Zimbaboe. Nanantena ny hioty katsaka hatramin'ny 10 taonina isak'ireo taniny 20 hektara tsirairay novoleny izy. Saingy rehefa nahita lavaka telo tsy dia nahazatra azy teny amin'ny ravin'ny voliny, ary potipoti-dravina toy ny vovoka navelan'ny tsofa teny akaikin'ireo ravina sy ny faritra ambony, tsapany fa misedra olana izy…
“Tany ampiandohana, noheveriko fa ireo bibin-tsaonjo mpiantafika ao Afrika ireto (Spodoptera exempta) manafika ny voliko. Nividy carbaryl aho, fanafody famonoana bibikely, ary dia nafafiko tamin'ireo voly. Tsy nanova zavatra izany, nitohy nitombo tao amin'ny tany famboleko ry zareo », hoy izay tamin'ny IRIN. Nitsidika ny toerana famboleny ireo manampahaizana avy amin'ny ministeran'ny fambolena, saingy efa taraiky loatra raha ny hoe hamongotra ireto bibin-tsaonjo mpiantafika rehefa fahavaratra (ny teny hoe “fahavaratra” dia manondro ny fahazarana misakafon'ity bibin-tsaonjo ity : any Amerika, tany niaviany, rehefa faran'ny lohataona sy fanombohan'ny fahavaratra izy no tena mitondra fahavoazana betsaka.
Efa voamarika ihany koa ny fisiany any Ginea, na dia vao herinandro monja aza izay, tsy hita tao anaty lisitra natolotry ny FAO ho isan'ireo firenena tratra izy. Manaitra i Ousmane Koumanthio Tounkara, taorian'ny niresahany tamin'i Abdoulaye Kaloga Diallo, mpiasa amin'ny fiarovana ny voly, ary manoratra hoe:
Misy bibin-tsaonjo tena faran'izay tendankanina mandravarava ao amin'ny prefektioran'i Mali nandritra ireo andro faramparan'ny volana May ary mety hahavoa vohitra 21 ao amin'ny kaominina ambanivohitr'i Yembering izay androtehany ireo zavamaniry dia eny an-tsaha.
Tombana antenantenany, zavamaitso 250 hektara no efa nohanin'ireto mpitsidika tsy iriana ireto. Ao anatin'ny fihazakazahan'ity loza mahatsiravina ity, ireo sampandraharaha misahana ny fiarovana ny zavamaniry dia mihevitra fa ny fitsaharan'ny orana no isan'ny mahatonga izany.
Tsy mbola an-dàlana akory ny fepetra hasetry izany satria tsy misy fitaovana na iray aza hiatrehana azy eo am-pelatanana, izany no nanindriana mafy ny fanentanana.
Ho an'i Abdourahamane Barry, avy amin'ny tranonkala ifandrimbonana Guinéenews, mbola ratsy lavitra ny toedraharaha satria efa niteraka fahafatesana biby fiompy sahady io loza mananika io ho an'ireo tantsaha sasany any amin'ny faritra :
Taorian'ny prefektioran'i Mali, Tougué, Labé sy Koubia, misy bibin-tsaonjo, ireto vahiny tsy iriana ireto, efa tonga any Dondé, distrika iray eo ambany fiadidian'ny soba-prefektioran'i Parawol, prefektioran'i Lélouma. Ireto bibin-tsaonjo ireto izay mandravarava ny zavatra rehetra, na azo lazaina ho izany, tonga eo ambany masony.
Raha nifampiresaka an-telefaona tamin'ny Toniandahatsoratry ny Guinéenews ao an-toerana, nanamafy ny fisian'ireo bibin-tsaonjo ireo ny lehiben'ny sampandraharaham-paritra ho fiarovana ny voly.
« Tena misy tokoa any amin'ireo prefektiora dimy ao amin'ny fari-piadidian'i Labé ireo bibin-tsaonjo ireo. Bibikely tena manimba ny fambolena. Tsara tsipihana fa nahavita nanimba fambolena tanaty indray mipi-maso izy ireto. Amin'izao fotoana izao, mizotra mankany amin'ireo vohitra mbola misy zavamaitso ny dian-dry zareo. Araka izany, rotehany daholo izay hitany eny an-dàlana. Tratra daholo ny karazam-boly rehetra », hoy i Alpha Oumar Bah nanazava.
Any amin'ny faritra sasany, ankoatry ny fambolena, nisy ny osy tra-pahavoazana noho ny nataon'ireo bibin-tsaonjo ireto tao Diogoma, soba-prefektioran'i Sannoun ao amin'ny prefektioran'i Labé. Osy iraikambinifolo no maty nitsako ravina nisy ireto bibin-tsaonjo ireto.
Ny zavamisy dia efa faran'izay mandrava amin'ny faratampony sy mandrotika izay rehetra lalovany io olitra io. Rehefa lasa lolo, afaka manidina mifindra 100 km izy ary mitombo haingana be mihitsy. Any amin'ny faritra iray eto amin'izao tontolo izao izay efa miharihary rahateo ny tsy fanjarina ara-tsakafo, sarotra ny handrefy ny vokadratsy ho aterak'ity firohotana ity.